अर्थ बाणिज्य Archives - Page2of 177 - SangaloKhabar
बिराटनगर । सुनको मुल्य पुनः ह्वात्तै बढेको छ । दैनिक एक हजारले सुनको भाउ बढ्दै गएको छ। बिहीबार प्रतितोला ६४ हजारमा कारोबार भएको छापावाल सूनको मुल्य शुक्रवार एक हजारले बढेर ६५ हजारमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै तेजावी सुनकाे मूल्य ६४ हजार ७ सय पुगेकाे छ। बुधबार ६३ हजारमा काराेबार भएकाे सुन बिहीबार एक हजारले बढेर ६४ हजारमा काराेबार भएकाे थियाे। अन्तर्राष्ट्रिय ...
सुनको मुल्य हालसम्मकै बढी
काठमाडौँ । सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड बनेको छ। सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बिहीबार प्रतितोला सुनको मूल्य ६४ हजार निर्धारण गरेको छ । यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ प्रतिऔस ३६ अमेरिकी डलरले बढेको छ । बुधबार ६३ हजारमा कारोबार भएको सुन बिहीबार ६४ हजार निर्धारण गरेका छौँ,’ महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, ‘यो मूल्य अहिलेसम्मकै रेकर्ड हो ।’ महासंघका अनुसार बु...
बिराटनगर। प्रदेश १ सरकारले धनकुटामा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न ४ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । बिभिन्न बिशेषज्ञ सेवासहितको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याईएको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा यसलाई समावेश गरेको छ । प्रदेश सभा बैठकमा आईतबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । सोहि क्रममा उनले धनकुटामा बिभिन्न बिशेषज्ञ सेवासह...
प्रदेश १ मा ४२ अर्बको बजेट सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)
बिराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ का लागि ४२ अर्ब भन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा आईतबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । जसमा चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । अन्तर सरकारी हस्तान्तरणका लागि ९९ ...
प्रदेश १ मा ११ महिनामा २९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च
बिराटनगर । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने केन्द्र सरकारको रोग प्रदेश सरकारहरुमा पनि देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्रै रहँदा विकासतर्फ प्रदेश-१ सरकारको प्रगति पटक्कै चित्तबुझ्दो छैन । चालू आवका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, जेठसम्ममा जम्मा १० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले पुँजीगततर्...
प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, के-के समेटिए ? (पूर्णपाठसहित)
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख प्रा.डा. गोविन्द तुम्बाहाङले प्रदेशसभामा आज नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले दोस्रो प्राथमिकतामा पर्यटनलाई राखेको छ । आउँदो आर्थिक वर्ष भित्र प्रदेश एकमा ५ लाख पर्यटन भित्र्याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । जल पर्यटनको सम्भावनालाई उजागर ...
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्राेलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। आज बिहान १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी निगमले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढाएको छ। निगमले पेट्रोल,डिजेल र मट्टितेलमा लिटरमा १ रुपैयाँ ५० पैसा मूल्य बढाएको छ। योसँगै पेट्रोल लिटरुको १११ रुपैयाँ र डिजेल / मट्टितेल ९८ रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले बजेट भाषणबाट डिजेल र पेट्राेलमा अतिरिक्त विका शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो।
वृद्धभत्ता बढेर ३ हजार पुग्यो
काठमाडौं । सरकारले बृद्धभत्ता एक हजार बढाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेटमार्फत सरकारले बृद्धभत्ता बढाएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संयुक्त संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा हाल दिइँदै आएको भत्तामा एक हजार रकम बढाइएको हो । अरु भत्ता एक हजार बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमअनुसार हाल जेष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अपांगता भएकालाई मासिक २ हजार रुपैयाँ, आंशिक अपांग भएकालाई ६ सय रु...
एक्सेल बैंक र एशियन लाइफबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
झापा । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक र एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । ग्राहकहरुले एक्सेल बैंकको शाखाबाट एशियन लाइफमा जीवन बिमा गर्न सक्ने तथा बीमा सम्बन्धि सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी सम्झौता गरिएको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार पोख्रेल र एशियन लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश कुमार श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ग्राहकहरुले एक्सेल बैंक...
काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ । नेपाल आयल निगमले शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा २ र डिजेल/मट्टितेलमा १/१ रुपैयाँ घटाएको हो । भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्य सूची अनुसार इन्धनको मूल्य घटेको हो । मूल्य समायोजन पश्चात् पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ९ रुपैयाँ ५० पैसा कायम भएको छ । डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ९७ रहेको छ। निगमले हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग...